KTO-USA: သမ္မတကြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗွီဒီယို နှင့် စင်ကာပူကချင်ခရစ်ယန်များ ၂၇-နိုဝင်ဘာချီးမွမ်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားခြင်း
သမ္မတကြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗွီဒီယို နှင့် စင်ကာပူကချင်ခရစ်ယန်များ ၂၇-နိုဝင်ဘာချီးမွမ်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားခြင်း
Posted by Admin Sunday, November 20, 2011
တခုပဲရှိတယ် ..လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဆိုးတယ်လို့ သမ္မတကြီးလက်ညိုးထိုးရင် .. ကျန်တဲ့လက်၎ချောင်းက သမ္မတကြီးရဲ့အစိုးရကို ငါကပိုဆိုးတယ် ၀န်ခံသလိုဖြစ်နေမလား တွေးမိပါတယ်။ သားဆိုးဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကို ကြည့်ရင် .. ကချင်လက်နက်ကိုင်များဟာ သူတို့မြေကို တရုပ်ဝိသမစီးပွားရေးသမားများနဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်သားသမီးကုမဏီများပဲ နေရာယူနေကြတယ်။ ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူ ကချင်၊မြန်မာများကို (အထူးသဖြင့် KIA ကို ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်နိုင်သေးရင် သူ့ဖာသာနေပါစေ။ အကြမ်းဖက်မတိုက်စေလိုပါ။) အင်္ဂလိပ် ဂျပန်ကို တိုက်တဲ့အခါ မြန်မာဘီအိုင်အေက ပျောက်ကျားအရေးပါသလို၊ တကယ်လို့ တရုပ်အန္တရယ်ရှိလာရင် KIA ပျောက်ကျားများက မြန်မာပြည်တခုလုံးအတွက် အတိုင်းတာတခု ကာကွယ်အထိ နိုင်ပါတယ်။ အမေရိနောက်ခံနဲ့ တရုပ်အန္တရယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တွန် နှစ်၅၀အတွင်း Obama & Burma မြန်မာပြည်လာလည်ခြင်းက ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် ရှေ့တန်းကချင်နယ်မြေက ပိုပြီးအဓိကကျပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
သမတကြီးပြောသလို (၁)ကျုပ်တို့ ကချင်နယ်မြေ ငြိမ်းချမ်းချင်ပါတယ်။ (ျ)ဒီမိုကရေစီစီးပွားတိုးတက်ချင်ပါတယ်။ (၃) ညံ့ဖျင်းလှတဲ့ပညာရေး၊လူမှုရေးများက လွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်။ ..
News Conference Youtube: http://murann.com/utheinsein.htm
ကချင်မိတ်သဟာရ ကန်ဘာကန် (စင်ကာပူ)တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် လစဉ်နောက်ဆုံးပါတ် ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းရှိပါသည်။ လာမည့်အပတ် 27-Nov-2011 (Sunday 7pm) တွင် အထူးအစီအစဉ် ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော် သီဆို၊တီးမှုတ် ချီးမွမ်းကြမည်ဖြစ်သဖြင့် လာရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
နမူနာ ကချင်ရိုးရာသီချင်းဗွီဒီယို (အစမ်းလေ့ကျင်စဉ်)
Kachin Community in Singapore is under God Grace. They will Praise Lord on coming 27-Nov-2011 Sunday Service. Here is some of their Praise Songs practice BlipTV.
မိတ်ဆွေများကို ခေါ်လာပြီး အားပေး၊နားဆင်ကြပါရန်...၊
Blip.TV short videos
Copyright 2009 : KTO-USA: သမ္မတကြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ဗွီဒီယို နှင့် စင်ကာပူကချင်ခရစ်ယန်များ ၂၇-နိုဝင်ဘာချီးမွမ်းပွဲတော် ဖိတ်ကြားခြင်း Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com